Saameynta Xalalka Lacag Bixinta Sugan ee Dukaameysiga Onlineka | Martech Zone
Saameynta Xalalka Lacag-bixinta Sugan ee Dukaameysiga Online-ka
Axad, Disembar 18, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Marka ay timaado dukaamaysiga qadka tooska ah, dabeecadda dukaanleydu runti waxay u soo degaysaa waxyaabo muhiim ah:
doonayay oo - haduu isticmaaluhu ubaahanyahay ama uusan ubaahnayn sheyga internetka lagu iibinayo.
Price - in qiimaha sheyga uu ka adkaado rabitaankaas iyo in kale.
Product - in alaabtu ay tahay sida loo xayaysiiyay iyo in kale, iyadoo dib u eegista ay inta badan gacan ka geysaneyso go'aanka.
trust - in iibiyaha aad wax ka iibsaneyso iyo inkale lagu aamini karo… bixinta, gaarsiinta, soo celinta, iwm.
Cabsida laga qabo adeegsiga internetka ayaa laga adkaaday dhowrkii sano ee la soo dhaafay, xitaa aaladaha mobilada. Si kastaba ha noqotee, celceliska celceliska ka tagayaasha gawaarida waa 68.63%, oo siinaya fursado badan oo dheeraad ah iibiyeyaasha ecommerce si ay u hagaajiyaan una horumariyaan khibradooda internetka. Celceliska dukaamaysiga UK wuxuu qarash gareeyay celcelis ahaan £ 1247.12 (in kabadan $ 1,550 US) sanadkii 2015 wadartaasina way sii kordheysaa!
Dabcan, maahan booqde kasta oo dhigaya sheyga gaadhiga waa in loo qaataa inuu yahay iibsade. Waxaan badanaa aadaa goobta wax laga iibsado si aan ugu daro liistada alaabada kaliya si aan u arko waxa wadarta canshuuraha iyo rarku noqon doonaan… markaa waan soo laaban doonaa marka miisaaniyaddu jirto oo aan sameeyo iibsashada dhabta ah. Laakiin heerkaas ka tagistaas, qaar badan ayaa ka tagay kaliya sababtoo ah ma aysan helin goobta aaminka ah.
Macaamiisha waxay rabaan nidaam lacag bixin oo aamin ah, dhaqso ah oo fudud, sida lagu qeexay muuqaalka sawirada ee animated ee hoose. Ka fogow welwelka ku saabsan amniga lacag bixinta iyo isbaarooyinka dheer iyo kuwa wareerka leh, ugu dambayntiina u dooro albaab adag oo lacag bixin ah ganacsigaaga internetka kaas oo gacan ka geysan doona natiijooyinka dukaamada faraxsan! Hoos ka fiiri xog uruurinta Wadarta Wadarta, Saga-dukaameedka internetka ee 'Saga Shopper': In Raadinta Xal Lacag Bixin Sugan.
Asalka adigaa iska leh bixinta lacagta. Haddii macaamilku bilaabo inuu iska hubiyo degel cusub oo aanu dareensanayn inay tahay mid lagu kalsoonaan karo ama ay aad u adag tahay, qatar uguma jiraan inay galaan macluumaadka kaararka deynta. Xaqiiqdii, walaacyada ku saabsan amniga lacag bixinta waxay keeneysaa 15% ka-tagista gawaarida dukaamaysiga ee goobaha ganacsiga. Way iska tagi doonaan oo sheyga waxay ka heli doonaan goob kale. Bogga tartamehaagu xitaa wuu ka qaalisan yahay… laakiin haddii ay ka raaxo badan yihiin, ma ka fikirayaan inay bixiyaan dhowr doolar oo dheeri ah.
Wadarta Hawlgalku waxay tilmaamaysaa 4 astaamood oo muhiim ah oo sameeya albaab xoog leh oo lacag bixin ah
Albaabka lacag-bixinta ayaa macaamiisha siiya wax ballaaran soo diyaariyeen fursadaha lacag bixinta.
Albaabka lacag bixinta ayaa siiya ganacsadaha an qalab ka mid ah qalabka kor u qaada macaamil ganacsi si loo ballaariyo waxyaalaha la bixiyo.
Albaabka lacag-bixinta ayaa xoog leh maaraynta khatarta iyo xakamaynta khayaanada aasaas u ah barxaddeeda.
Albaabka lacag-bixinta ayaa sii socota sii daayo waxyaalo cusub taas oo la socota isbeddelka macaamillada internetka.
Tags: heerka ka tagidacelcelis ahaan ku qaatay internetkasicir-bararkacode kuubanecommercetirakoobka ecommercerar xawli ahxakamaynta khiyaanadaHeerarka beddelashada adduunkadukaanka internetkadoorashooyinka bixintaamniga lacag bixintamaaraynta khatartagaadhigiina shoppingGawaarida dukaanka oo laga tagokharashka internetkawadarta howshaukBoqortooyada Ingiriiska
SocialReacher: Waa maxay U-doodista Shaqaalaha Warbaahinta Bulshada?
3 Ikhtiyaarada Shixnadaha Ganacsi ee Keena Habdhaqanka Iibsiga